Federighi na ekwu maka ihe kpatara Swift ji emeghe oghe | Esi m mac
Craig Federighi na-ekwu maka ihe kpatara ha jiri họrọ ime Swift ka ọ bụrụ asụsụ mmeghe
Naanị ụnyaahụ Apple mere nke ọma na nkwa ya wee wepụta koodu isi ya Asụsụ mmemme mmemme ka ọha na eze. Yana a nnukwu ozi ọma maka ndị mmepe, Apple si agadi osote onyeisi oche nke software, Craig Federighi, nyere a di na nwunye nke Ajụjụ ọnụ na-ekwu banyere uru nke a liberalization nke Swift na uru ọ pụrụ iweta maka ọdịnihu.
Na-aga n'ihu, na Web na-esote, Federighi kwuru na na Apple a kwenyere na Swift bụ ọdịnihu nke asụsụ mmemme yana ndị mmepe ga-eji ya ọtụtụ afọ. Nkwupụta siri ike nke onye isi Apple, mana m na-ele anya na ọ dịghị anya site na eziokwu ebe ọ bụ na nchikota nke ịdị mfe nke ojiji yana n'aka nke ya nnọọ elu egosipụta na-eme ka ọ bụrụ asụsụ dị ezigbo enyi na ndị mmepe mgbe ị na-eji ya.
Kpọmkwem ihe o kwuru na ajụjụ ọnụ ahụ bụ:
Anyị kwenyere na Swift bụ asụsụ mmemme mmemme na-esote, nke ndị obodo ga-eji wee mee mmemme iri afọ ndị sochirinụ. Anyị kwenyere na na mgbakwunye na njikọ ọsọ ọsọ na nchekwa n'etiti sistemụ na ngwa asụsụ mmemme, ọ dịkwa nghọta na ịdị mfe ịmụ.
Banyere ọdịnihu Ebumnuche C, Federighi kwuru na Apple ga-aga n’ihu ịkwado asụsụ a, ma ya onwe ya ma obodo ndị mmepe. Federighi kwuru, "Echeghị m na onye ọ bụla kwesịrị inwe nchegbu maka ọdịnihu Ebumnuche C,"
Federighi gara n’ihu gosi na ebumnuche bụ isi nke isi mmalite nke Swift bụ ịhapụ onye ọ bụla nabata ya ma mụta ihe niile gbasara ya.
Ọ bụrụ na mahadum chọrọ imezigharị usoro ọmụmụ ha ma malite ịkụziri Swift mmemme, ịbụ onye mepere emepe na-eme ka ọ bụrụ mkpebi dị mfe maka ha ime […] Apple enweghị nchegbu gbasara ebe ọ chọrọ ka ndị mmepe tinye Swift, site na Kama nke ahụ, ka Gbaa ọsọ ọsọ nke ka mma.
N'ajụjụ ọnụ ọzọ nke Ars Technica ọ kọwakwuru banyere echiche banyere agụmakwụkwọ na-ekwu maka ya Nhazi zuru ezu site na Apple ya na ndi nkuzi na ndi nkuzi nwere mmasi na akuzi Swift n’ihi na ibu “okwu ngosiputa” di otua ga enye aka dika iwebata atumatu atumatu, na imeghe ihe n’eme ka odi mfe itinye ya n’usoro akwukwo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Craig Federighi na-ekwu maka ihe kpatara ha jiri họrọ ime Swift ka ọ bụrụ asụsụ mmeghe
Ihu ọma inye Google mkpọtụ na ihu
Apple na - egosipụta patent maka ngwa ebi 3D agba
Atụmatụ IDC kwuru na e rere nde Apple 3.9 na nkeji ikpeazụ a